‘भारतीय हुनुपरे फिल्म नै खेल्दिनँ’:-मनीषा | मरुभूमीको कोसेली nepalkuwait
‘भारतीय हुनुपरे फिल्म नै खेल्दिनँ’:-मनीषा
Posted on फ्रेवुअरी 15, 2010 by आर. बी. बुढाथोकी	बलिउडमा व्यस्तता कम हुँदै गएपछि मनीषा कोइरालाले ‘फेरि भेटौंला’ पछि दोस्रोचोटि नेपाली सिनेमामा देखा पर्दै छिन् । नेपाली दर्शकले नेपाली फिल्ममै उनलाई हेर्न २२ वर्ष कुर्नुपर्‍यो । ‘धर्मा’ को छायांकनका लागि उनी चार दिन पोखरामा रहिन् ।सुटिङ सकेर पोखरा घुम्ने उनको चाहना भने पूरा भएन । ‘सुटिङले गर्दा यताउति कतै जान पाइएन,’ उनले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘सुटिङमै व्यस्त हुनुपर्‍यो, एक दिन मौसम खराबीले कामै भएन ।’ टेलिभिजन हेर्दै र आफन्तसँग फूलबारी रिसोर्टमा गफगाफ गर्दैमा बित्यो त्यो दिन । उनका साथ बाबुआमा र भाइबुहारी पनि थिए । ‘धर्मा’ शाहीकालीन मन्त्री डा. दुर्गा पोखरेलको लगानीमा बन्दै गरेको हो । २२ वर्षअघि ‘फेरि भेटौंला’ छायांकनमा पोखरा टेकेकी नायिकाले दोस्रो चलचित्र यहीँ गर्न पाएकामा खुसी लागेको बताइन् । खुलेको हिमाल देखेर दंगिएकी मनीषा बारम्बार हिमाललाई नै पृष्ठभूमि पारेर सुट गर्न छायांकार राजुविक्रम थापालाई भनिरहेकी हुन्थिन् । थापाले पनि उनका इच्छा पूरा गरिरहे ।
नेपाली राम्रोसँग बोल्न र बुझ्न नसक्ने मनीषालाई सुटिङ क्रममा गीत याद गरेर नाच्न निकै हम्मे पर्‍यो । सुटिङ युनिटका प्राविधिकदेखि अन्य सदस्यसम्मलाई अंग्रेजी लवजको उनको नेपाली बुझ्न कठिन भयो । ‘बलिउडतिर हेलमेल बढी हुँदा मेरो नेपालीमा समस्या आएको छ,’ नायिकाले भनिन, ‘परिवारका सदस्यसँग बढी नेपाली नै बोलेर सुधार्ने प्रयासमा लागेकी छु ।’
सराङकोट, फेवाताललगायतमा सुटिङ गर्ने भनिए पनि पूरा नहुने डरले ‘धर्मा’ युनिटले फूलबारी रिसोर्ट परिसरमै सकायो । ‘म छिटो र्फकनुपर्ने भएकाले हतार गर्नुपरेको हो,’ मनीषाले
भनिन्, ‘छोटो समयमा सुटिङ सकिए पनि निकै रमाइलो अनुभव भयो ।’
मनीषाले राम्रो अफर नआएकाले नेपाली चलचित्रमा नदेखिएको बताइन् । ‘अफर त बीचमा आएका थिए तर कथा राम्रो लागेन,’ उनले भनिन्, ‘अहिले कथा मन पर्‍यो र खेलेँ । राम्रो र चित्तबुझदो भयो भने अरू पनि खेल्नेछु ।’ ‘धर्मा’ मा राजेश हमाल, निखिल उप्रेती, संयोग पोखरेल, अनु शाह, माधव आचार्यसहितले खेलेका छन् । पोखरा आउनुअघि मनीषा १५ दिन काठमाडौंमा भएको सुटिङमा व्यस्त थिइन् । उनी मनीषा गत बिहीबार हतार-हतार सुटिङ सकेर काठमाडौं फर्किएकी थिइन् ।
‘उनी एकदुई दिनमै मुम्बई र्फकनुपर्ने भएकाले यस्तो भएको हो,’ निर्देशक दीपेन्द्र के खनालले भने ।
Filed under: समचार « ठुलो साइजको कण्डमको प्रयोगले सेक्सको मजा बढाउने ‘युरोपमा पर्यटन प्रबर्द्धन गरिरहेका छौं’:- राजदूत प्रमेशकुमार हमाल »